आफ्नो वेभसाइट चलाउन नसक्नेले के देश चलाउछन ? - Parichay Network
आफ्नो वेभसाइट चलाउन नसक्नेले के देश चलाउछन ?
परिचय नेटवर्क द्वारा	 ३ फाल्गुन २०७६, शनिबार ११:३५ मा प्रकाशित
सरकरले दुई वर्ष पुरा ग¥यो तर देश र जनताको जीवनस्तर २० को १९ भएन । सरकारको यो दुईवर्ष चड्कीला र काण्डहरुमा मात्र वित्यो । गुठी काण्डले रन्थनिएर संचारक्षेत्रको अंकुशमा लागेको सरकारले कहिले पत्रकारलाई चिथा¥यो त कहिले गीतकार गायकलाई चिथोर्न दग¥यो ।
जनता शोकमा बाँचेको बेला सरकारका प्रधानमन्त्री बालुवाटारमा बाँसुरी बजाएर रोमाञ्चित भए । काम गरेर सामान्य जनताका जनजिविकाका समस्याहरुलाई हल गर्नुको सट्टा पानी जहाज र रेलको कथा सुनाएर मैमत्ता आशनमा विराजमान बनिरह्यो । सामान्य जनताहरु उपचारको नाममा सिटामोल र जीवनजल नपाएर मर्नुपर्ने बाध्यतामा बसिरहनुप¥यो । बाँच्ने उत्साहले भन्दा पनि मर्ने डरले आजको दिनमा गरिवहरु आफ्नो जीन्दगीलाई घिसारिरहेका छन् ।
सरकारको निर्णयले जनताको मुहारमा खुशियाली छाएन बरु देशका ठुला व्यापारीहरुको ढुकुटीमा पैसा भरियो । सरकारलाई गोविन्द केसिहरु अपराधीजस्तो लाग्न थाल्यो अनि शिक्षा र स्वास्थ्य माफियाँहरु आफ्नाजस्तो लाग्न थाल्यो । सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लुट मच्चाउनेहरुलाई सहयोग गरिरह्यो । तिनिहरुले मच्चाएको लुटको सिकार बिद्यार्थी र विरामीहरु बनिरहे । सरकारको आडमा मच्चाएको लुटको विरुद्ध बोल्नेहरु सरकारको निशानामा बारम्बार परिरहे । उनिहरुको आवाजलाई बन्द गराउन सरकार प्रशासनिक दमन गर्न पनि पछि परेन ।
सरकारी जग्गा घरानिया व्यापारीहरुलाई कौडीको भाउमा बितरण गरियो । बदलामा व्यापारीहरुले उच्च पदस्थ राजनीतिज्ञहरुको उपचार खर्चसहित बिदेश भ्रमणको इन्तजाम गरिदिने । तर आज पनि भुमिहिन सुकुम्वासीहरुको समस्या उत्तिकै छ । कम्युनिष्ट खोल ओडेको सरकारको संमृद्धिको खाकाभित्र हुँदा खानेहरु कहिल्यै अटेन सकेनन् । यो सरकारलाई सडकमा ठेला घुचट्नेहरुको पिडाले कहिल्यै दुखेन ।दुख्यो त पाँचतारे होटलमा लगेर लन्च डिनर गराउनेहरुको पिडाले दुख्यो ।
सरकारी स्कुलको अवस्था हिजोको तुलनामा झन दयनिय बन्दै गयो । धेरै गाउँहरुबाट सरकारी स्कुलहरु बिस्थापित भए । आज पनि सुदुर गामहरुमा बर्षेनि सामान्य ज्वोरोको उपचार नपाएर मर्नेहरुको संख्या बढेको बढ्यै छ । हिजोको दिनमा भन्दा भ्रष्टाचार झन चर्को बढेर गएको छ । हिजोको भ्रष्टाचारलाई आज पनि संस्थागत गरेर नितिगत भ्रष्टाचारको बाटोमा सरकार दगुरी रहेको छ ।
विज्ञान र प्रविधिमा दक्षता हाँसिल गरेका व्यक्तिहरु निराशाको सिकार भएर बिदेश पलायन भईरहेका छन् । आज देशमा बिदेश जान नसक्नेहरु र देशमा लुट मच्चाउन सकिन्न भनेर बसेकाहरु धेरै भटिन्छन् । हिजोको तुलनामा आजको दिनमा बिदेश पलायनको संख्या झन बढेको छ । हिजोको दिनमा कामका लागि मात्र बिदेश जानेहरुको संख्या बढि थियो आजको दिनमा अध्ययनको नाममा पैसासहित बिदेश पलायन हुनेहरुको संख्या बढ्दैछन ।
गाउँमा कुनै संभावनाहरु नभएपछि शहर झर्नेहरुको लर्को उस्तै छ । बेरोजगारी समस्याको कारण अपराधिक गतिविधिहरु पनि उत्तिकै बढेको छ । जनताहरुले सरकारसँग सामान्य आशा पनि राख्न छाडेका छन् । सरकारको नेतृत्व गरेको व्यक्तिले सरकारको आलोचना सुन्ने चाहदैन । युद्धको कमाण्डरको जस्तो रुखो बोल्ने सरकारी प्रवत्ताले जनताको प्रश्नहरुलाई खिल्ली उडाउँदै प्रश्न गर्नेहरुलाई थकाउँदै भन्छन्–‘हेप्ती दुईतिहाईलाई ’
यसो सोचिल्याउँदा चित्त बुझाउने ठाम कहि छैन् । उद्घाटन र रमाईलोमा दुई बर्ष बिताएको ओली सरकारले आजसम्म जनतालाई देशमा सरकार भएको सामान्य अनुभतिहरु पनि दिलाउन सकेन । दुरदर्शी भिजनविना अगाडी बढ्दाको हविगत के हुन्छ भन्ने कुराको उदारण खोज्न अब अन्त दिमाग लगाईरहनु पर्ने अवस्था छैन । सरकारलाई हेरे पुग्छ ।
दुईवर्षको विचमा करिवन तिन महिना देशको प्रधानमन्त्रीले हस्पिटलमा विताएका छन् । बिरामी मान्छेले चलाएको देश कसरी स्वस्थ रहन सक्छ ? यद्यपी उहाँको स्वाथ्यलाभको कामना छ । तर देशको प्रधानमन्त्रीलाई देशको भन्दा बढी स्वाथ्यको ख्याल गर्नुपर्छ भने त्यो बेला न देश निरोगी हुन्छ न प्रधानमन्त्री ने निरोगी हुन्छन् ।
धेरै ठुला कुरा गरेर ढलेको सिन्को भाँच्न नसक्ने सरकारको गतिविधिको कारण युवाहरुमा राजनीतिप्रतिको निराशा दिनदिनै बढिरहेको छ । कसैले प्रश्न ग¥यो भने प्रतिक्रिया दिन हतार गर्ने प्रधानमन्त्रीले प्रतिक्रिया दिदादिदै आफ्नो धोती फुस्केको थाह पाउँदैनन् ।
अरु त अरु उहाँको सयन्त्र कति गतिशिल र प्रविधिमैत्री छ भन्ने कुराको उदारण उहाँको निजि वेभ साइट हेर्दा पनि हुन्छ । सरकार कति लापरबाह र वेवारिसे पारामा चलेको छ भन्ने कुरा वेभसाइटले नि बताउँछ । जनताले प्रधानमन्त्रीको वेभसाइट हेरेर ज्ञान लिन्छु भनेर खोल्यो भने पोर्न फिल्महरु हेर्न पाउछन् । सरकारले पोर्न साइटमा प्रतिवन्ध त लगाएको छ तर प्रधानमन्त्रीको वेभसाइटको डोमेन समयमा नै रिन्यु नहुँदा पोर्न भिडियोसहितको सामाग्री खुल्छ । आफ्नै वेभसाइट व्यवस्थापन गर्न नसक्ने प्रधानमन्त्री के देशको व्यवस्थापन गर्लान ।
यो सरकारलाई हेप्न वा गिराउन लगाईएको मिथ्या आरोपहरु होईनन् । सरकारको यो दुईवर्षलाई गम्भिरतापुर्वक समिक्षा गर्ने हो भने जनताले चित्त बझाउने ठाउँ कतै भट्दैनन् । सत्य तितो नै हुन्छ यो सत्यमा टेकेर अवको दिनमा सबैलाई सरकार भएको अनुभुति दिलाउन सकोस शुभकामना ।